Igama elingukhiye Ucwaningo Kumele Luphendule Le Mibuzo | Martech Zone
NgoMsombuluko, Agasti 13, 2012 NgeSonto, Septhemba 8, 2013 Douglas Karr
Sibuke izinkampani eziningi zenza lokho ezikubiza ngokuthi ucwaningo lwegama elingukhiye futhi ngiyamangala ukuthi bangakanani imininingwane abayikhumbulayo lapho beluleka izinkampani ukuthi yimaphi amagama asemqoka okufanele aqondiswe ngamasu wabo wokuthengisa wokuqukethwe. Nayi eminye imibuzo ebalulekile esiyiphendulayo
Yimaphi amagama asemqoka okuguqula ukuguqulwa? Uma ungazi, ngincoma ukuxhuma analytics kahle nokubika ukuze ukwazi ukubona amagama angukhiye aqhuba ibhizinisi… hhayi ithrafikhi. A iphutha eliyisihluthulelo Sibona yizinkampani eziningi ukugxila kumagama angukhiye ahambisa ithrafikhi kunamagama asemqoka aqhuba ibhizinisi. Ukuthola ukukalwa okusemthethweni kuthatha isikhathi - qiniseka ukuthi usebenzisa leyo mithombo ngokuhlakanipha ngokubeka ezingeni lezivakashi ezithengayo. Ababonisi bavame ukuthola amagama asemqoka anamavolumu amakhulu okusesha. Ngaphandle kokuthi uthengisa ukukhangisa kusayithi lakho, udinga okungaphezu kokuvakashelwa - udinga ibhizinisi
Yimaphi amagama asemqoka owaklelisayo njengamanje? Ngoba izinkampani zichitha isikhathi esiningi zihlaziya isiminyaminya, zivame ukuphuthelwa amagama angukhiye angabekeki kahle kodwa kungaba. Ukuhlonza amagama asemqoka namakhasi owangcwatshwa ezilinganisweni kuyithuba eliyinhloko loku shintsha lawo makhasi futhi uthole isikhundla esingcono nge. Sisebenzisa Semrush ukuthola amakhasi namagama asemqoka esikleliswe kuwo. Bese sihamba sithuthukisa lawo makhasi futhi imvamisa sithola ukuqhuma okuhle ngezinga nethrafikhi.
Yiziphi izihloko ezimaphakathi amagama akho angukhiye angahlukaniswa ngazo? Amakhasi kusayithi lakho angabalwa ngezinhlanganisela zamagama angukhiye eziningi. Kubalulekile ukuyiqonda izihloko ezibalulekile amagama akho angukhiye angaqondaniswa nokufanisa inhlangano nokuqondiswa kwewebhusayithi yakho. Ngabe isigaba sakho sendawo siyafana nesigaba sakho segama elingukhiye? Uma kungenjalo, kungahle kube namathuba okwakha amakhasi nezingxenye zesayithi eligxile kuthrafikhi yosesho lwendalo. Sivame ukuncoma amakhasi ambalwa we-organic landing agxile kwigama elingukhiye kunomkhiqizo noma insizakalo yenkampani. Lawo makhasi aqhuba isikhundla, ithrafikhi, nokuguqulwa. I-WordStream inethuluzi elingukhiye lapho unganamathisela khona amagama awukhiye ayi-10,000 kuwo futhi izokuhlukanisela wona ngezigaba.
Yimaphi amagama angukhiye okufanele ukuncintisane nawo? Izikhathi eziningi, ukuncintisana kwakho kuthola ithrafikhi ongaba… ukube uqonde kuphela ukuthi babeklelwani ngalokho ongekho. Futhi, amagama amaningi angukhiye kungenzeka angakwazi ukuthola ukuhlelwa okuhle ku. Kungani uncintisana ngamagama asemqoka ongeke uwine? Futhi, Semrush bekulokhu ithuluzi lethu lokukhetha lokhu. Singabheka izizinda ezincintisanayo bese sibuyekeza amagama asemqoka izinga lethu lomncintiswano ukuze sibone ukuthi asinazikhala yini kucebo lethu lokuqukethwe.
Yimaphi amagama angukhiye ongakhiqiza okuqukethwe kuwo okuzoholela emazingeni nethrafikhi? Kuhle ukukhiqiza uhlu lwethani lamagama asemqoka nemishwana efanayo ... kepha yimiphi imishwana ongayibhala ngokuthunyelwe kwebhulogi, amakhasi okufika okwe-organic, infographics, amaphepha amhlophe, ama-ebook, izethulo namavidiyo ku namuhla lokho kungaholela emiphumeleni esheshayo? Asikholwa ukuthi ucwaningo lwamagama asemqoka luphelele ngaphandle kokuthi unikeza izincomo zokuqukethwe kanye nokuhlaziywa. Ukuthola amagama angukhiye anomsila omude (ivolumu ephansi, efanele kakhulu) kube lula ukuwasebenzisa I-WordStream.
Ngendlela, uma ungasibonanga isikhombimsebenzisi somsebenzisi esivele sithuthukisiwe kusuka ku- Semrush, kuyamangalisa:
Sivame ukusebenzisa Semrush ukuhlaziywa okuphelele ne-WordStream ngokutholwa kwe-longtail nokuhlukaniswa kwamagama asemqoka. Ukudalulwa: The Semrush isixhumanisi kulokhu okuthunyelwe isixhumanisi sethu sokuxhumana.
Tags: eliyisihluthuleloucwaningo lwegama elingukhiyeAmagama angukhiyeamagama angukhiye we-longtailsemrushukusakazwa kwamagama